Indlu ezimeleyo kumhlaba weentyatyambo, onemithi
Indlu epholileyo ye-35 m2 ebekwe entliziyweni yeBourg de Mortagne sur Gironde. Igadi enemithi kunye neentyatyambo, ivaliwe, izolile. Isitudiyo: indawo yokungena: ikhitshi elinefriji, isitovu secombi kunye nomatshini wokuhlamba izitya, umatshini wekofu wenseno, indawo yokutyela, kunye nebhedi yesofa Umgangatho wokuqala onegumbi lokulala elipholileyo kunye nembonakalo ebalaseleyo yendalo; Igumbi leshawari kunye neWC eyohlukeneyo Kufuphi nazo zonke iivenkile: i-coop, ii-bakeries ezi-2, ikhemesti kunye nebhula Umbono wePanoramic S / Port 3mn, 20mn ukusuka elunxwemeni, kufutshane neTalmont s / Gironde.
Iimfama ezimnyama kwiingcango kunye neefestile kumgangatho ophantsi kunye ne-roller shutter kumgangatho wokuqala. I-Cocooning umoya kunye nokuhombisa okumibalabala, kunye negumbi lokulala elinothando elinokuhlobisa okucokisekileyo kumgangatho wokuqala. Indawo yokuphumla yokuphumla kumgangatho ophantsi, onokuthi usetyenziswe njengendawo yokusebenza.Yonke into ilungiselelwe ukuthuthuzela kwakho kunye nokuvuselelwa kwakho, wamkelekile.
IBelvedere enombono ophefumlayo wePort of Mortagne imizuzu emi-5 kude, ecaleni kwendlela engumgongxo ekhokelela kwiPort buccolique de Mortagne encinci. Emva koko ukufikelela kwichweba ngeenyawo ecaleni kwendlela ukuze ufumane indawo yokugcina iintaka kwindawo ekhuselekileyo yendalo kwiindonga zeGironde.
Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka eTalmont sur Gironde, ilali yabakhenkethi edwelisiweyo kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kulwandle lokuqala.
Abafowunelwa banakho phakathi kwe-9 kusasa kunye neye-9 p.m.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mortagne-sur-Gironde